သငျသညျဝဘ်ပေါ်တွင်သင်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှာဖွေနေတဲ့အခါ,သင်မူကား,ဂန္ညစ်ညမ်းထက်နည်းနည်းပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုချင်တယ်,သင်အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းလိုအပ်ပါတယ်,အရာသင်သည်မည်သည့်စိတ်ကူးယဉ်ဘို့လိုအပ်သမျှနှင့်အတူကြွလာ. ကျနော်တို့ကဒီမှာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေစုဆောင်းခြင်းဝဘ်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းများနှင့်အတူလာသေး၏. ဒီစုဆောင်းမှုအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဤမျှလောက်သင်အခမဲ့ဂိမ်းကစားနိုင်သည်ကိုယုံကြည်မည်မဟုတ်သင်အထင်ကြီးသွားကြသည်. သို့သော်ထိုသို့စစ်မှန်တဲ့င်! သင်တို့သည်ဤဂိမ်းတွေအတွက်ဘာမှမဆပ်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်., သငျသညျအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်မယ့်ကျနော်တို့မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်သို့မဟုတ်အလှူငွေကိုမမေးကြဘူး.
သင်ရုံသင်တို့အပေါ်မှာင်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ရန်လိုအပ်ပါတယ် 18 အသက်အနှစ်,ပြီးတော့သင်တို့သည်နောက်ကန့်သတ်နှင့်အတူအခမဲ့အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်. တစ်ချိန်တည်းမှာ,ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာရှိသမျှကစားသမားတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့င်. ဒီစုဆောင်းမှုမှာဂိမ်းအသစ်တွေကိုလည်းအပတ်တိုင်းယူဆောင်လာပြီး၎င်းတို့အားလုံးကိုဘရောက်ဇာမှာတိုက်ရိုက်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းများမှာထျန်း5 ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သင့်တွင်ရှိသည့်မည်သည့်ကိရိယာတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်သည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှု၏နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်သင်၌မွေ့လျော်ကြလိမ့်မည်မျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်ခဲယဉ်းသို့မဟုတ်စိုစွတ်စေသည်ဘာကို,သင်တို့သည်ငါတို့၏စုဆောင်းမှုအတွက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်စွန့်စားပေါ်တွင်သင်ယူလိမ့်မည်ဟုရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းရိုးလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအရာအားလုံးရှိသည်။ ဒီမှာအရာအားလုံးအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပေးနိုင်တဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးလမ်းအတွက်သင်အံ့သြဖွယ်များနှင့်ပြင်းထန်သောဟော်မုန်းပေးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ကျနော်တို့ရှိသည်ဂိမ်းအားလုံးကိုအဓိကအမျိုးအစားများအတွက်ရေတိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပူဇော်ရှိရာဤစာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့စုဆောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်.ပိုမိုသိရှိလိုပါကဖတ်ပါ.
ဒီစုဆောင်းမှုကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကစားသူတွေကစားချင်လောက်မယ့်အမျိုးအစားအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံဖို့သေချာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဂိမ်းတွေကိုအားလုံးအတွက်ယုံကြည်တယ်၊ကိုယ်ကယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတစ်ခုကိုပြေးတယ်၊ကစားဖို့အမာခံဂိမ်းတွေရှာမယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေ၊လိင်တူချစ်သူတွေ၊လိင်တူကလေးတွေအတွက်တောင်အမျိုးအစားတွေပါတဲ့ကွျန်တော်တို့အသိုင်းအဝန်းအတွက်ဂိမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးအတွက်ပြင်းထန်မှုအဆင့်အားလုံးပါဝင်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။, လိင်ဂိမ်းများနှင့်အခြားခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အောက်ပါအပိုဒ်များရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၏အဓိကကဏ္ဍအားလုံးအကြောင်းပြောပြကြစို့။
ဧည့်သည်တွေအများဆုံးတီးခတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ရဲ့အပူဆုံးအကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဆော့(ဖ်)ဝဲနဲ့လာတာပါ။ အကြောင်းကတုံ့ပြန်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားဟာသင်လိုသမျှအတုမြင်အတတ်သင်အတွေ့အကြုံနဲ့လာနေတာပါ။အကြောင်းကညစ်ညမ်းမှုကိုနှစ်သက်တဲ့နည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်မယ့်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအမျိုးအစားကနေဓာတ်ဆော့ဂိမ်းတွေကစားတဲ့အခါညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ရတာထက်အများကြီးပိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရရှိမှာပါ။ အကြောင်းကဒီဂိမ်းတွေမှာဘယ်အရွယ်ရောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကမှမကမ်းလှမ်းနိုင်သလိုအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိမှာမို့လို့ပါ။, အချို့ကစားသမားများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းတို့ကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကျော်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုရမသာ,အရာဤမျှလောက်များစွာသောယုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေများအတွက်တံခါးတို့ကိုဖွင့်လှစ်,သင်မူကားလည်းသင်သူတို့အားဇာတ်ကောင်ကိုလျက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူကိုနှင့်အတူလုယူခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်တု,ခံရလိမ့်မည်သောဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်ရ.
အဆိုပါလိင်မျှတည်ထားဂိမ်းသင်လိုချင်တဲ့မိန်းကလေးမဆိုကြင်နာကိုလျက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျကျော်ကြားသားငယ်များကဲ့သို့ကြည့်ဖို့ဇာတ်ကောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်,သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကဲ့သို့သို့မဟုတ်သင်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ရှိသည်မည်သည့်အချစ်နဲ့တူ. အခြားတစ်ဖက်မှာ၊ချိန်းတွေ့ဆုံတွေ့သူတွေထဲမှာ၊ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဆန်းကြယ်တဲ့ဗားရှင်းကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတော့မြေပုံပေါ်ရောက်ပြီးဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုး၊ရုပ်ရည်၊စရိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ပါ။, လူကြီးကစားခြင်းကိုဝါသနာပါသောအခြားသူများလည်းရှိပါလိမ့်မည်။
အခမဲ့အရွယ်ရောက်ဂိမ်းလောကီသားတို့သည်ပဲညစ်ညမ်းကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာကဲ့သို့ဖြစ်၏,လူတွေမယှဉ်နိုင်တဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုချစ်သောသဘောရှိ. ဂိမ်းကစားသူတွေကိုစာရင်းပြုစုပြီးသူတို့အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဆောင်ကြဉ်းပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးဂိမ်းအချို့သည်လိင်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်။ အဲဒီထဲကဘယ်ကစားသမားမဆိုမက်မက်မောမောစွန့်စားခန်းတွေနဲ့လာကြတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာနို့မှုန့်ထဲကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊သူ့မေမေ(သို့)သူ့ကြောင့်သုံးရတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်လေးကိုအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်သွားတဲ့သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကစားနိုင်တဲ့ကစားနည်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့မိန်းမပျိုစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ဖေဖေမေမေ-သမီးအားကစားပြိုင်ပွဲလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်အတော်လေးလူကြိုက်များ., လိင်မဆက်ဆံတဲ့ကစားနည်းတွေပါဝင်တယ်။အဲဒီမှာညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေတားမြစ်ထားတဲ့ကစားနည်းတွေနဲ့လိင်တူချစ်သူတွေညီအစ်မတွေဇာတ်လမ်းတွေကိုခံစားရမှာပါ။
အဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းဂိမ်းအားဖြင့်သင်တို့၏မိန်းမလှလေးတွေခံစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်.ကြောက်မက်ဘွယ်င်သင်သွားရာလမ်းကိုပိုပြီးဇာတ်လမ်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မယ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျမိနျးမအခန်းကဏ္ဍ-ကစား၏ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုသောအခါ,အရေးယူဘယ်လောက်ကြောက်မက်ဘွယ်နေပါစေ,သင်ညစ်ညမ်းကြယ်အမှန်တကယ်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျော်မရနိုင်. ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံးတားမြစ်ထားတဲ့ဂိမ်းထဲမှာပျော်မွေ့တဲ့အခါကိုယ်ကစားနေတာကိုမေ့သွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားမှုထဲနှစ်မြှုပ်လိုက်ပြီးကစားပွဲထဲကအမေအိုတွေ၊သမီးတွေ၊ဒါမှမဟုတ်ညီအစ်မတွေဟာကိုယ်နဲ့တကယ်ဆက်စပ်နေတယ်လို့ခံစားရမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဘိဂဲဂိမ်းများကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထောင်နှင့်ချီသောယုတ်မာသောဂိမ်းကစားသူများကနှစ်သက်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်မာစတာ၏ရှုထောင့်နှင့်တစ်ဦးဒိုမီနိုပြည်တော်ပြန်၏တဦးတည်းနှစ်ဦးစလုံးမှကစားရပါလိမ့်မယ်သောဤအမျိုးအစားတွင်ဂိမ်းများရှိ. ဘီအမ်ဒဗလျူဂိမ်းအများစုသည်လိင်ကျွန်များနှင့်အတူလာနေကြသည်။ ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုဂိမ်းကိုပျော်မွေ့မယ့်ဂိမ်းနှစ်မျိုးတွေ့ခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကြီးစိုးမှုကစားနည်းတွေ၊ကြက်နဲ့ဘောလုံးညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊ခြေဆစ်လက်ဆစ်ချိုးတာတွေပေါ့။ ဤဂိမ်းအချို့တွင်အရှက်တကွဲဖြစ်ခြင်းကိုလည်းခံစားရနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ဂျော်ဂျီလိင်ဂိမ်းများရှိသည်,သင်သီးသန့်လုံးဝအခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်ရှာတှေ့နိုငျတဲ့ရှားပါးနယ်ပယ်.
သင်အတင်းအဓမ္မလိင်နှင့်ငိုသူငယ်သို့ဆိုရင်,သို့ဖြစ်.သင်တို့သည်ငါတို့၏ပူဇော်သောမုဒိမ်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစားလိင်ဂိမ်းများကိုထုတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်. အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်,မင်းသမီးအရှိဆုံးသည်ဤဂိမ်းများမှဆွဲဆောင်သူများဖြစ်ကြ၏. ဒီအမျိုးအစားထဲကတစ်ချို့ဂိမ်းတွေဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေကစားကြတာပါ။ပြီးတော့သူတို့ဟာဒစ်ကင်းကြီးနဲ့ချောမောတဲ့အမျိုးသားကိုမဖျက်စီးခင်ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်ရတာကိုစိတ်ကူးယဉ်မှုအပြည့်နဲ့ကျေနပ်ကြတယ်။
ယခင်အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဘီအမ်ဒဗလျူဂိမ်းများအပြင်အမျိုးသမီးများအတွက်အခြားဂိမ်းများစွာလည်းရှိသည်။ ဤခေါင်းစဉ်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးအော်ဂဇင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူကြွလာနေကြတယ်. အဆိုပါပုံပြင်များချောမောအထီးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူကြွလာနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဟာသူတို့ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ဖို့အယူခံလိမ့်မယ်. ဤကဏ္ဍတွင်အတွက်၊သငျသညျအစရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘီဘီ interracial အားကစားပြိုင်ပွဲ၊အချို့သူတို့ကိုလာမယ့်အတူလက်တွေ့ကျသော cuckold အရေးယူ၊threesomes၊နှင့်ပင်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းဂိုဏ်း bangs။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ,ကျနော်တို့စုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့လိင်ဂိမ်းအချို့ကိုပေး. ဤရွေ့ကားဂိမ်းအိပ်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှအမွှေးအကြိုင်တစ်နည်းနည်းကိုထည့်သွင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်. ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ့်အစားဓာတ်ဆော့ဂိမ်းတွေကစားဖို့အကြံပြုပါတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်အပေါငျးတို့ဆေးလိပ်သောက်ပူယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများကသူတို့အလောင်းကောင်နှင့်ပတ်သက်.လူကိုမလုံခြုံစေနိုင်သောကြောင့်င်. ဒါပေမဲ့လူကြီးဂိမ်းထဲကဇာတ်ကောင်တွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ဂရပ်ဖစ်အကြောင်းအရာတွေကဘယ်လောက်လက်တွေ့ကျမယ်ဆိုတာပါ။
လိင်ဆိုင်ရာကစားနည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကစားနည်းပါ။ လူကြီးလိင်စွန့်စား၊လူကြီးလိင်စွန့်စား၊လူကြီးလိင်စွန့်စားစတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပါဝင်တဲ့ဂိမ်းတွေနဲ့လာပါတယ်။ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အခမဲ့လိင်ဂိမ်းတွေလည်းကစားသူတွေအကြိုက်ဆုံးထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။ ဤေဆာင္းပါးကိုဂႏၲဝင္မဂၢဇင္းမွေရးသားတင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုကျွန်မတို့ရဲ့တသီးပုဂ္ဂလအသိုက်အဝန်းအကြောင်းကိုမေ့မထားခဲ့ကြပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ်စူးစမ်းကြကုန်အံ့လိမ့်မည်ဟုလိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းဂိမ်းများနှင့်အတူလာ. လိင်တူချစ်သူဂိမ်းအပိုင်းမှာဘက်ပေါင်းစုံကရှိသလောက်ထင်မြင်ချက်ကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။ သင်ချိန်းတွေ့နှင့်လိင်မျှော်လင့်ချက်ကနေရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများနှင့်ပင်လိင်တူချစ်သူဘမ်းဆီးသို့မဟုတ်လိင်အကြမ်းဖက်အရေးယူမှုမှအရာအားလုံးကိုခံစားရလိမ့်မယ်. အခြားတစ်ဖက်မှာတော့လိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေလိင်တူချစ်သူတွေဆိုရင်လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းအများအားဖြင့်မင်းသမီးအားဖြင့်ကစားနေကြတယ်. လိင်တူဆက်ဆံသူတွေနဲ့ဂိမ်းကစားနည်းတွေကိုလည်းချိန်းတွေ့ကြတယ်။
အကောင်ကြီးတွေ၊အန်စာတုံးကြီးတွေပါတဲ့သားငယ်တွေကိုကြိုက်ရင်၊ကျွန်တော်တို့ဆီမှာအသည်းအသန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေရဲ့အံ့အားသင့်စရာအစုအဝေးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဆိုက်၏ရှမရဲအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ သင်တို့သည်ဤဂိမ်း၏တစ်ကိုယ်တော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြင်ကွင်းများကိုဖြတ်ပြီးလာမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်း,တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,သင်ရူးသွပ်သွားစေလိမ့်မည်ဟုအမြင်များဖြင့်အဘို့ထိုသူတို့အပေါ်နို့စို့နေစဉ်ပူရှေမိုင်သူတို့ရဲ့ပိုးရှုပ်ပါလိမ့်မယ်အရာအတွက်.
ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်တွင်ရှိသည့်အမာခံလိင်ဂိမ်းများသည်ဘရောက်ဆာကစားရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထမ်5 နဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ကြသောကြောင့်,ရဲ့,သူတို့မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်,အွန်လိုင်းဂိမ်းဖန်တီးခြင်း၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းများ၊အိုင်ပီဂိမ်းများသို့မဟုတ်အလုပ်စားပွဲဂိမ်းများကိုရှာဖွေရန်မလိုပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာ၊ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်သုံးဘရောက်ဇာကိုဖွင့်နိုင်သရွေ့ဤဂိမ်းများကိုကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တဖန်သင်တို့နေပါစေသူတို့ကစားသောအရာကိုပလက်ဖောင်းကနေအခြားကစားသမားများ၏ကုမ္ပဏီခံစားနိုင်. သူတို့ကတပ်ဆင်ခြင်းမဆိုကြင်နာမလိုအပ်ပါဘူး,တိုးချဲ့ရေး,ဒေါင်းလုပ်,သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်မှသို့မဟုတ်အခြားအရာ. သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါပါလိမ့်မယ်;, သူတို့ကဝန်တစ်မိနစ်ခန့်ကြာလိမ့်မည်ပြီးတော့သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်နှင့်အတူသူတို့ကိုကစားနိုင်ပါတယ်. ဒီဂိမ်းအသစ်တွေထဲကဂရပ်ဖစ်တွေကိုမြင်ရတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမယုံတော့ဘူး။ အဆိုပါလက်တွေ့ကျကျအရေးယူ3လိင်ဂိမ်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပြောင်များနှင့်ခန့်ညားဂိမ်းအဖြစ်ဂိမ်းရှိသမျှသည်အခြားသောစတိုင်များအတွက်နှစ်ဦးစလုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်. ဂိမ်းတွေကိုစွဲကိုင်တဲ့အခါသုံးခဲ့တဲ့ရူပဗေဒနဲ့လှုပ်ရှားမှုအင်ဂျင်တွေကြောင့်ပါ။ အလောင်းတွေတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုမှန်ကန်ခံစားရစေမည်ကြောင်းဇာတ်ကောင်အပေါ်ဤမျှလောက်များစွာသောအသေးစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှိပါတယ်., အဆိုပါသားငယ်များကိုသင်သွားပါလိမ့်မယ်ရုပ်ပြ(သို့)မောက်မှဖြစ်ကြသည်ရင်တောင်,သူတို့ကိုသင်ပြုသမျှသောအမှုအရာတုံ့ပြန်လမ်းအရာအားလုံးအစစ်အမှန်ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်.
မီးဂိမ်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ရုံတင်မကပဲကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲမှာထျန်း5 ဂိမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ သင်အခုဒီဂိမ်းအချို့ကိုကစားစတင်နိုင်ပါသည်. ဒီဂိမ်းမကစားခင်ဘာကိုမှဒေါင်းလုတ်လုပ်၊တပ်ဆင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှာရှိတဲ့အဓိကထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးဆီကဖုန်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးမယ့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ထားလို့ပါ။
အတုအယောင်လိင်ဂိမ်းနည်းပညာကအသစ်ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေဟာမယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံးစွန့်စားခန်းဂိမ်းအချို့ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဤဂိမ်းများတွင်အရေးယူမှသာလိင်ပစ္စည်းပစ္စယလျှော့ချသည်မဟုတ်. သင်စီမံကိန်းကိုခံစားရရှေ့တော်၌ထိုမစ်ရှင်နှင့်ရှာဖှေရေးတစည်းရှောက်သွားရပါလိမ့်မယ်,သောသင်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးရရှိသည့်အခါသင်ခံစားရအပျော်အပါးတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့င့်ကြောင်းအာရုံရကြလိမ့်မည်.
အကြှနျုပျတို့သညျအဘယ်သူမျှမအကောင့်နှင့်အတူအခမဲ့သမျှသောဤဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်သည့်အပေါ်အဆုံးစွန်သောအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းနေသူများကဖန်တီးပြောဂုဏ်ယူနေ. သင်ပင်ဂိမ်းအပေါ်မှတ်ချက်များထားခဲ့ပါနှင့်မျှမအကောင့်ကိုနှင့်အတူမက်ဆေ့ခ်ျကိုဘုတ်အဖွဲ့အတွက်တက်ကြွစွာရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကညစ်ညမ်းဆိုက်ပြေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောဒဿနမှကျေးဇူးတင်စကားင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုအဝေးဟာဒီဝန်းကျင်မှာဧရာမအသိုက်အဝန်းတစ်ခုစတင်စုစည်းမှာကိုသိကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဝက်ဆိုက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ၊ဂိမ်းတွေအားလုံးကိုဒီအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လက်လှမ်းမီမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေချင်တယ်။ ကလစ်နှိပ်တဲ့ဂိမ်းတွေ၊ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်မှာပြင်းထန်တဲ့ကြော်ငြာတွေမပါဝင်ဘဲဒါကိုလုပ်ပါတယ်။, ဒီဘက်ပါ,ငါတို့သည်သင်တို့သည်ငါတို့၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအချိန်အားလုံးဖြုန်းပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်. ရှင်တို့ကျွန်မတို့ဆီပြန်လာဖို့သေချာအောင်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်။အကြောင်းကအပတ်တိုင်းအပ်လုဒ်လုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းတွေကိုရှင်တို့ဆက်ကစားချင်မှာမို့လို့ပါ။ တခါတရံတွင်သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်တခုခေါင်းစဉ်ရ. ဒါကြောင့်,သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်? စတင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကြည့်ရှုအပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစား!အရသာ သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းတွေနဲ့မှားသွားနိုင်ပါတယ်.